Atileet DaraartuuTulluu Koree Olompikiitti deebitee waaliin hojjechuuf walii galte - Kichuu
HomeSportsAtileet DaraartuuTulluu Koree Olompikiitti deebitee waaliin hojjechuuf walii galte
Atileet Daraartuu Tulluun Koree Olompikii Itoophiyaatti deebi’u qondaalli Koree Olompikii Itoophiyaa BBC’tti himan.
(bbcafaanoromoo)—Koreen Olompikii Itoophiyaa guyyaa kaleessaa (Roobii) A.L.I Onololeessa 26, 2012 walgahii Yaa’ii waliigalaa atattamaa Hoteela Ambaasaaddaritti taa’e irratti dhimma atileetii kanaa mari’achuun walii galteen raawwatuu qondaalli koree kanaa ibsaniiru.
“Daraartuun gara koreetti akka deebituufi akkuma kana duraa akka hojjettu waliigalaniiru. Miseensonni korees dhiifama ishee gaafataniir,” jechuun Itti-gaafatamaan waajjira Koree Olompikii Itoophiyaa Obbo Taammiraat Baqqalaa ni dubbatu.
“Daraartuunis rakkoo jiru mari’achuun hikneerra. Kana booda kan humna qabu humnaan, kan ogummaa qabu gahee isaa akka adeemsa dhaabbatichaan marii bu’uura godhachuun akka hojjetu waliigalleerra, hojii kootti deebi’eera jetteetti,” jedhan.
Marii atattamaa kana dura atileet Daraartuun komii qabdu xalayaan kan barreessite yoo ta’u, hirmaattotaaf qooduun ishees himameera.
Xalayaa kana irratti Pirezidantiin Koree Olompikii Itoophiyaa Dr. Ashabbir W/Goorgis hacuuccaa akka irratti raawwatan ibsiteetti.
Marii taasaifameen booda Dr. Ashabbir W/Goorgis Atileet Daraartuun Koree Hojii Raawwachiiftuu Koree Olompikii Itoophiyaa keessa akka turtu akka fedhan dubbataniiru jedhameera.
“Ishee [Daraartuu] malee hojjechuu hin dandeenyu, isheen mallattoo biyya kenyaati, hunda keenya caalaa isheen ispoortiif dhihoo waan taatef nu barbaachifti,” jedhan jechuun Obbo Taammiraatitu dubbate.
Ganna darbe Koreen Olompikii Itoophiyaa Yaa’i Waliigalaa Magaalaa Dabra Birhaan taasise irratti isheen waamamuu dhabuun ishee akka ishee gaddisiise BBC’tti himtee turte.
Atileetiin fiigicha fageenya dheeraan gurra horatte kuni murteen koree Olompikii koreen osoo hin taane nama tokko, pirezidantichaan, murtaa’a jechuun kuni yoo hin sirranne akka keessaa baatu ibsitee turte.
Atileet Daraartuun kuni waggoota sadii darbaniif miseensa koree hojii raawwachiiftuu koree kanaa ta’uun hojjetaa jirti.
Atileet Daraaratuu Tulluu guutummaa jireenyashee ispoortii Itoophiyaa guddisuuf, keessumaa atileetiksii keessatti ijoollummaa hanga ga’eessummaatti of kennitee hojjetaa jirti. Olompiksii Baarseloonaa bara 1992 irratti fiigicha meetira 10,000tiin Afirikaattis, Itoophiyaattis dubartii shaampiyoonaa jalqabaa ta’uun seenaa guddaa qabdi.
Injifannoo bara sanaarraa kaastee dorgommii idil-addunyaa irratti mo’achuurra darbitee atileetota hedduuf fakkeenya taateetti.
Atileet Daraartuu yeroo ammaa kana ammoo Pirezedaantii Federeeshinii Atileetiksii Itopphiyaa ta’uun tajaajilaa jirti.